Owesifazane ngubani ukhulelwe, ukudla okunempilo vitaminized uyisidingo, kungcono noma ubani akuyona imfihlo. Ngakho-ke, omama esizayo Ukudla kufanele kufake izithelo nemifino anamavithamini, fibre, acid nokumbiwa nosawoti. Izidlo imifino nezithelo asiza bazogcwalisa umzimba nazo zonke izincwadi ezidingekayo, kanye ukukhiqiza isisu futhi ubungozi laxative.
Konke lokhu kusikisela ukuthi isihluthulelo sempilo kamama nengane engakazalwa kuwukubulala umsoco ofanele ngesikhathi sokukhulelwa ingane. Kodwa kufanele kuphawulwe ukuthi akuwona wonke izithelo nemifino Kusizuzisa emzimbeni. Ukuze hhayi ona impilo yabo ungawoni ingane, kubalulekile ukuba kwahlukaniswe ukudla ku saziso futhi engafunwa. Kulesi sihloko sizogxila lokhu okumnandi, futhi eside elindelwe entwasahlobo imifino efana radishes.
Abomma abanengi umndeni ngendlela ukhathazekile nge umbuzo ukuthi kungaba khona radishes ngesikhathi sokukhulelwa. Futhi kungani kungenjalo? Ngempela, izinto zakhe eziningi ewusizo! Ukwakheka kuhlanganisa isithombo cellulose, ushukela, amafutha, salicylic acid, ama-enzyme, kanye amavithamini ahlukahlukene, ezifana A, K, C, B2, B1, B6, PP. Ngaphezu kwalokho, izingxenye isithombo kukhona nosawoti-magnesium, i-potassium, i-sodium, phosphorus, i-calcium nokusansimbi. Amaphesenti eliphansi fluoride kubuye ingxenye yaleli yemifino. Futhi kule isithombo iqukethe amaprotheni, okuyinto ingxenye kakhulu ukwedlula e-squash, zucchini, isitshalo seqanda notamatisi. Kancane ukunambitheka peppery lokhu yemifino is etholwe lwesinaphi namafutha abalulekile.
Radishes zisebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa kuyasiza ngoba ihlinzeka decongestant mnene futhi umphumela choleretic. Iphango at ukusetshenziswa inyuka umkhiqizo, ngaphezu, ngcono motility nokulahla esiswini. Ngenxa isithombo juice oyenza isebenze umzimba futhi ukugaya. Ngaphezu impahla yayo esemqoka kule yemifino kuvimbela emdlavuzeni. Lokhu mkhiqizo ewusizo hhayi kuphela kwabesifazane abakhulelwe, kodwa futhi iziguli abakhuluphele, lapho izinkinga isibindi noma nenyongo sesinye onesifo, futhi kuwusizo sifo noma isifo sikashukela.
Kufanele kuqashelwe ukuthi isithombo kuyasiza ngesikhathi sokukhulelwa hhayi kuphela, kodwa ihamba phambili. Iziqongo imifino aqukethe amavithamini efanayo e ihlumela. Amahlamvu futhi ube ukufutheka, kodwa, naphezu kwalokhu, ayabudla kuhle. Zingasetshenziswa njengendlela isithokelo nganoma yisiphi isidlo, isibonelo, inyama, amazambane, isobho, inhlanzi kanye ahlukahlukene side dish. Kuhlanganiswe ne eziqongweni yemifino imifino njenge-parsley, onion, dill. Isithombo ngesikhathi sokukhulelwa ingagxila kokubili ifomu fresh okuphekiwe, kodwa akufanele sikhohlwe ukuthi umkhiqizo fresh azigcina zonke amavithamini kanye nezakhi.
Ukusetshenziswa isithombo ngesikhathi sokukhulelwa
Spring - kuba inkathi lapho umzimba nje idinga amavithamini. Futhi musa ukuthenga radishes ngesikhathi esinjengalesi Kungamampunge nje owesifazane okhulelwe hhayi kuphela, kodwa umuntu ovamile. Kodwa umama fresh, namanzi, impande bezinsizwa Irreplaceable isikhathi entwasahlobo. Njengoba sekushiwo, lokhu zemifino calcium, ngaphandle okuyinto akunakwenzeka kumiswa amathambo kwemisipha izicubu-fetus. Futhi ebalulekile ingxenye isithombo kuyinto folic acid. Ngesikhathi bangakunaki Vitamin kwanciphisa ingozi yokuba fetus kombungu esizalweni.
Potassium, i-phosphorus, manganese, sodium, insimbi, zinc, ithusi - konke kufakwa indlela yokwakheka yemifino, okungukuthi kulezi izingxenye kudinga kakhulu emzimbeni owesifazane okhulelweyo. Ngenxa vitamin K no-C, equkethe umkhiqizo, evimbela ukopha ngesikhathi sokubeletha. Isithombo kuwusizo sokukhulelwa ngenxa yokuthi iqukethe fibre zemvelo eziningi ezinkulu, futhi sezinyawo kanjalo kwesejwayelekile, kuvimbela ukuqunjelwa, izinkinga wamathumbu zinyamalale, ukuthi ngesikhathi sokukhulelwa khona ngokuvamile lokho kwanele. Konke lokhu kusikisela ukuthi isithombo akuyona nje ezidingekayo, futhi empeleni kuyadingeka ukuze owesifazane okhulelwe.
Kodwa namanje engase ibe yingozi kwezinye izimo, isithombo. Lena engathandeki ukusebenzisa eluhlaza yemifino, naphezu semali amavithamini, okuyinto uzonyamalala ngesikhatsi ukwelashwa ukushisa. Uma isithombo ngesikhathi sokukhulelwa isetshenziswa njengoba injalo iluhlaza, kumele kube kahle wageza futhi scalded ngamanzi abilayo, uma kungenjalo ungakwazi ukubamba salmonella noma E. coli. Konke kuhamba eziphilayo abangela izifo, okuyinto equkethwe imifino engaphekiwe. Ngenxa kubo angagcina izifo ezithile. Kungcono hhayi ukulimaza umzimba, ukudla isithombo e sikadali, luzosiza ukwehlisa ukubuyisa.
Isithombo ekukhulelweni. Izimo
Ngaphezu izakhiwo ezuzisayo kukhona Izimo ecacile, lapho ukusetshenziswa impande kumele ibe ngu- lutho. Isithombo kuyinto engathandeki ukusebenzisa ezigulini uhlushwa izifo emathunjini bese esiswini ezifana isilonda, kolwelwesi, ukubuyisa. Qedela ukususwa kwalo mkhiqizo kusukela ekudleni kuyadingeka kubantu abaye unhlangothi noma isifo senhliziyo, njengoba radishes kungase kube nomthelela ekwakhekeni thrombosis.
Imithi yendabuko kwenza kube nokwenzeka ukuba usebenzise radishes ikhanda kanye sciatica. yemifino libuye lisetshenziswe nokulungiselela buso yezimonyo. Ungakwazi udle radishes ngesikhathi sokukhulelwa ukugwema ukuqunjelwa, okuyinto avame ukuhamba Ukuthwala umntwana.
It lingahunyushwa baphetha ukuthi izinzuzo zalesi sitshalo impande kakhulu, ngakho-ke kungaba ngokuphepha ukungezwa ekudleni nsuku nokuthumba owesifazane owayezithwele, nje nge isidingo kuhlonipha imitsetfo elula.
Kuqinisa amathambo, ukudla inzuzo okunothile ngekhalsiyamu
Miso isobho - kuyini? Izimfihlo ukupheka izitsha.
Consumation: kuyini? Musa ukudida nomqondo
Kanjani ukwenza isiteshi ku-Youtube kahle